macluumaad socodka | Cosmos koobi karayn
data Space bilaabaan in ay ku dhaq iska dabiici ahayn oo dhan. Oo ma dareemaan waxay noqon kartaa oo kaliya mid ka mid ah, kuwaas oo diiday in la arko.
Tani Qaab-dhismeedka Waxaa hoos daryeel gaar ah iyo xeel dheer Cosmos koobi karayn oo ka dhigan inuu isaga u xiisaha.
goobjoog macluumaad siidaayey iyadoo la raacayo Heshiiska Space Common.
kasta ujeeddo leedahay fekerayo isagoo (shakhsiyadda), bartay natiijada rasmiga ah ee shuqullada our cilmi-baarista iyo tijaabo dhinacyo kala duwan, waxaa soo koraya ama hagaajinta jira aragtida ah nidaam u gaar ah. wakiil, ma nooc ka mid ah nooca la mid ah, ama hal dhinac dhaqanka, ixtiraam, reaction in wax kale, iyo, waa wax ka badan, sida aragtida gaar ah u gaar ah, haboon uu Inland nabadda. waayo-aragnimo u gaar ah, waxaan kaa caawin uxuu, oo awood u leh is-hagaajinta iyo caadadii horumarinta by gaar ah ciidamada iyo, la heli karo si, kartidooda, ma xaday Awoodaha iyo Awoodo kuwa kale.
Annagu ma cadeynta, in mar hore Waxaa: noo yahay cadayn ah, Waxaan aragnaa in (iyadoo aan loo eegin oo ka mid ah xubnaha aragtida iyo sida ay u arkaan). iyo waxa, in mar hore Waxaa Waxaan u isticmaali, in la kordhiyo mugga gaar ah shaqsi nolosha, in si kale loo dhigo ku nool dareenkaa, buuxi kasta Mid ka mid ah Us ah. sii kordhaya mugga nool content kasta element hal wax, waxaan la kordhiyo mugga nolosha ee guud. hawshan kasta Mid ka mid ah Us ah, iyo gacan ka geysaneysaa kasta, tan iyo in, in Dhigista nolosha qudhiisa.
Isku day kasta si ay u abuuraan ee degree mid ka mid ah faragelin ama caqabad dabiiciga ah Horumarinta khalqiga wax kasta oo, oo ku yaalla meel kasta Cosmos koobi karayn, loo arkaa rabshadaha nolosha iyo isku day dil shaqsi ahaan xayawaan iyo nolosha guud ahaan. Caddeyn in si faahfaahsan (tusaale) kor lagu sharaxay. Oo dadkii oo dhammu daliilka sida, tallaabooyinka, dalalkaasi tixgeliyaa, loo arkaa, dhigantaa la kac ah, ad The miyir iyo ujeedo dagaal ku dhowaad Cosmos koobi karayn, kuwaas oo nolosha habboonaanta (in kiisaska noocaas ah) waxaa jira isku day ah in ay duulaanka ah u dejisey. Iyo dhiiri lug ah hoosaad ka ciidamada dabiiciga ah wax kasta oo, marka la barbar dhigo in dembiilaha kasta – wax ka badan Xabbad of ciid in Space koobi karayn. Waxaa intaa dheer, noocan ah dhaqanka, loo arkaa Baxsadeen oo waxay doonayaan miyir (Waxaan soo qaadan doonaa fursad of Rights xoriyadda doorasho) waayo-aragnimo faa'iido Dhameystirka jiritaanka wadajir.
Waxaa la rumeysan yahay in ay u toobad keenaan xayawaan, qabaa iyo hirgelinta qorshayaasha sida, Waxay ahaayeen qabnona, by Samo falku inaad ah kuwaas oo keliya ayaa mas'uul ka ah falalka ay ku. Indeed in qayb ka mid ah bannaan waqtiga.
Haddii qof doonayo inuu noo doodid inuu xukumo kasta oo falal ka go'an, Naftooda ka fiirsaneysa inay xaq u – Waxaad ka qaban karin codsi ah in Golaha caalamka (Golaha afar iyo labaatankii oday ee Kitaabka Quduuska ah). Waayo, tan aad, tahay, leedahay kayd hay'adaha awoodda, xiriir la sameeyaan Ilaah, sida Church ee, Castel, Macbudyo iyo kuwa kale.(kuwaas waxaa waajib ku ah si ay u ilaaliyaan xayawaan inay soo galaan awoodi xiriirada heer sare ah), haddii aadan haysan waxaad adiga kuu gaar ah xoog iyo suurtagalnimada of xiriir. ka dib markii ay, aan helno codsigaaga la taaban ka koonkan Council oo aan macne ama ma aha talaabo buuxa oo ku saabsan qayb ka mid – Waxaan hagaajin doona habka of dhexgalka. haddii kale, ku farxa in waxaa jira.
Haddii qof jamasho mid noqonaysaa inay weyddiiyaan a, kalsoonida u hoggaansanaayeen, taas oo ay daruuri tahay waa in ay leedahay jawaab – waa in la tixgeliyaa:
1. jawaab dagdag ah waxaan ku siin si dhan xayawaan, gaaray gobolka Somadxi (somato) la joogo ee arrinta.
2. Waxaan isku dayaan in ay caawiyaan uxuu oo awood u leh soo saaro xaddi weyn ee Mind ah isku midka ah Kombuyuutarada, xisaabaha, ama daawato (maan) hawlgalka isku midka ah tiro badan oo ah xaaladaha metelay sida ay.
3. waxaan ka nixi uxuu Ruush nooca dadka iyadoo aan loo eegin meesha ay ku yaalaan.
4. Haddii aad miyir weli ma buuxiyaan shuruudaha ku xusan, laakiin aad qabto wax su'aalo ah – Jawaabaha waxaa laga heli karaa by Cosmos koobi karayn, Jaşi iyo Goshi . Si aad u hesho jawaab sax ah, ka hor inta eegay waxa uu noqon lahaa ku haboon si loo qorsheeyo su'aasha si waafaqsan talooyinka ah oo reer binu fudud:
A) Waxaa lagama maarmaan ah in su'aasha uu ahaa cad si aad u. B) Waxa ay ahayd Ujeedada. The) maado waa in ay ahaadaan arki karo. D) Su'aasha waa inay muraayad xiisaha. D) Weydii su'aal waa in ay ahaataa oo keliya, haddii is ku guuldareystay inuu jawaab. Haddii kale waxa aan eegi doonaa qaar akhlaaq leh oo dhaqanka, oo haddii aad iyagoo doonaya inay inay ka fekeraan oo idinka mid ah ma farxad?
khayraadka Tani waxaa si gaar ah loo leeyahay Togo, Yaa waxaa badanaa loogu yeeraa ilaah. Iyo sidoo kale dhammaan Space dhammaadka lahayn guud ahaan, iyo wax kasta oo dhibic Cosmos koobi karayn gaar ahaan. si kastaba ha ahaatee, kaliya aad jeceshahay… Oo haddii qof ma jeclaan – Waxaa loola jeedaa qof ma aysan jecleysan, iyo qaar ka mid ah qaban ma aha nooca xayawaan, in ah Rada. Waad ku mahadsan tahay.